Manasa ny fizahantany ao Myanmar: Be Enchanted
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Manasa ny fizahantany ao Myanmar: Be Enchanted
Aorian'ny dimy taona, nosoloin'i Myanmar ny marika famantarana ny fizahantany - Avelao ny diany hanomboka - ho "Enchanted."
“Be Enchanted” ny teny filamatra vaovao an'ny fizahan-tany any Myanmar dia fampanantenan-tena sahala amin'ny fanasana. Fanatanterahana izany. Fahatsiarovana izany. Fotoana fohy izao. Ny teny hoe "enchanted" dia mitazona ao anatiny ny tena fon'i Myanmar.
Aorian'ny dimy taona, nosoloin'i Myanmar ny marika famantarana ny fizahantany - Avelao ny diany hanomboka - ho "Enchanted." Ilay marika vaovao dia mampiseho an'i Myanmar ho toeran-kaleha, manintona, mystika ary mbola tsy hita.
Ny marika vaovao dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny fahafantarana an'i Myanmar ankehitriny amin'ny maha-fizahan-tany fizahan-tany sy fampitahana amin'ny toerana maro hafa. Ny fanadihadiana dia natao tamin'ny volana aprily 2018 tao amin'ny fialan-tseranan'ny seranam-piaramanidina Yangon Int'l ary ny fanadihadiana dia nahatsikaritra fa ny tagline "Be Enchanted" dia taratry ny traikefa tsara nananan'izy ireo niaraka tamin'ny vahoaka Myanmar - ny hatsaram-panahy sy ny fandraisana azy ireo ary manetsika ny endrik'i Myanmar izay tao an-tsaina - manokana, majika / mistery. Ny tagline dia heverina ho manintona, maharesy lahatra raha toa kosa ka mitarika te hahafanta-javatra.
Nandritra ny fanadihadiana dia nilaza ny iray tamin'ireo mpandeha tao amin'ny seranam-piaramanidina Yangon hoe: “Nosokosin'ity firenena majika ity aho isaky ny segondra faharetako teto. Mampientanentana ny vahoaka, ny kolontsaina ary ny toerana manintona ”.
Tonga any Myanmar ireo mpitsangatsangana miaraka amina fahatsapana mistery ary tsy fantatra izany no hitaona ny olona ho any Myanmar. Hiaina sy hizaha izay hitan'ny sasany ihany. Izy io dia ny mahita azy bebe kokoa momba ity tany ity. Ny fahatsiarovana ny fotoan'izy ireo teto amin'ity firenena ity dia nandoto ny fitadidiany tamina sary majika sy traikefa nahafinaritra izay nahatonga azy io ho tany manintona.
Ny endritsoratra famantarana “Myanmar” dia mifototra amin'ny endrika sy famantarana ny abidia Myanmar; ireo endri-tsoratra boribory dia mahatonga azy io ho sary miavaka tsara sy azo fantarina avy hatrany izay manome aingam-panahy fahatsapana hafahafa sy mamihina. Fa ankoatr'izay, ny endritsoratra, ny loko, ny sary ary ny firafitra voafantina dia maneho ireo singa fototra amin'ny fanahy sy ny toetran'ny toerana haleha ary ny traikefa izay ampanantenainy fa hampitaina.
Ny marika vaovao dia hampiasaina amin'ny fomba ofisialy amin'ny hetsika marketing any Myanmar toy ny seho fitsangatsanganana, seho fizahan-tany fizahan-tany ary marketing ara-niomerika mifandraika amin'ny hetsika / hetsika fampiroboroboana ny fizahan-tany manomboka amin'ny andro fandefasana.
Amin'ny maha sisin-tany farany atsimon'i Azia atsimo atsinanana azy dia maniry ny hampiseho ny tsara indrindra amin'ny zavatra atolotra azy ny firenena: morontsiraka tsara tarehy, renivohitra taloha, tempoly volamena, tendrombohitra be voninahitra, sakafo sy kolontsaina. Myanmar dia manana zavatra ho an'ny maso sy ny fo rehetra. Ny fahalalahan-tanan'ny tany sy ny mponina ao aminy dia hiantoka anao hampahatsiaro anao fa tsy mpitsangantsangana fa vahininao. Tsidiho ny Myanmar ary fantaro ianao.
Ekipa mpitantana vaovao hitarika ny Aliz Hotel Times Square
Ny fizahan-tany any Jamaika dia manangom-bola 10 tapitrisa dolara amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanadiovana ny morontsiraka